किन सार्कोमा घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण सम्पर्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न?
समय: 2019-07-29 हिट्स: 153
नोबलले तपाईलाई ल्याउन दिनुहोस् किन सार्कोमाको घर आईपल कपाल हटाउने यन्त्र सम्पर्क प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न?
पिग्मेन्ट नेभसलाई जन्मजात र अधिग्रहणमा विभाजन गर्न सकिन्छ, जुन जन्ममा अवस्थित हुन सक्छ, तर प्राय दुई वर्षको उमेर पछि सुरु हुन्छ। शरीरमा कतै छाला र श्लेष्म झिल्ली हुन सक्छ। छालामा पिग्मेन्ट नेभसको स्थानमा निर्भर गर्दै, यसलाई सीमा छालहरू, मिश्रित स्पुतम र इंट्राडेर्मल स्पुतममा विभाजन गर्न सकिन्छ।
घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण मुख्यतया कपाल हटाउने को प्रभाव प्राप्त गर्न कमजोर पल्स प्रकाश प्रयोग गर्दछ, जसले तातो उत्पन्न गर्दछ। जब कपाल हटाउने उपकरणले हाम्रो ककरोचहरू सामना गर्दछ, तातो दोब्बर हुनेछ, जसले जलाउने सम्भावना गर्दछ। एकै साथ, हामी छालामा संक्रमण गराउँछौं। यदि स्थिति गम्भीर छ भने, यसले छालाको क्यान्सर निम्त्याउँछ।
घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण मुख्यतया शरीरको कपालहरु लाई हटाउँछ, र यदि थुक्की उब्रेको छ भने। त्यसो भए छाला बिग्रिनेछ, त्यसैले हामी कालो बिच्छीलाई नहेर्नुहोस् सिफारिस गर्छौं जब यो धेरै कपाल भएको छ। यदि यसले वास्तवमा छालालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ भने तपाईंले हल्का खानुपर्दछ, मसलादार मसलादार खाना नखानुहोस्।
नोबेलको नवीन रिमाइन्डर, जब घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण प्रयोग गर्दछौं, हामीले शरीरका त्रुटि र असमान अंगहरूबाट बच्न कोशिस गर्नु पर्छ, ताकि छालाको अनावश्यक क्षतिको कारण नहोस्।
वास्तवमा, हाम्रो घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण मात्र कपाल हटाउने को कार्य हो, हामी कपाल हटाउने उपकरण को तीन कार्यहरु मा एक नजर दिनुहोस्।
१ 、 कपाल हटाउने (HR)
सौन्दर्य प्रणाली अनावश्यक कपालको उपचार गर्न तपाईंको आफ्नै घरको आराम र गोपनीयतामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। घर आईपल कपाल हटाउने उपकरण क्लिनिकली सुरक्षित र सबै छाला टोन र कोमल, प्रयोग गर्न सजिलो को लागी प्रभावकारी साबित भएको छ। तपाईं रेशमी, चिकनी छालाको दाढी बिनाको दाह्री र वेक्सिंगको समस्या बिना एक उपचारमा केही मिनेटको लागि अनुभव गर्न सक्नुहुनेछ।
२ 、 छाला कायाकल्प (SR)
आईपीएल छालामा काम गर्दछ र यसले गर्मी प्रभाव उत्पादन गर्दछ र उत्प्रेरित गर्न, फाइब्रोब्लास्टलाई नयाँ कोलाजेन र लोचदार फाइबर उत्पादन गर्न, रक्त संचारको गति बढाउन, छालाको लोच बढाउन, छालालाई पुन: जीवन्त तुल्याउन सहयोग गर्दछ।
、 एक्ने हटाउने (एआर)
आईपीएल छालामा काम गर्दछ र ब्याक्टेरियालाई मार्दछ र मेलानिन सड्छ, त्यसपछि शोषण वा शरीरबाट बाहिर पठाइन्छ जबसम्म एक्ने मार्कहरू हराउँदैनन्। सम्पूर्ण प्रक्रिया कुनै साइड साइड इफेक्ट वा ड्रग्स बिना नै छिटो छ।
अघिल्लो: RF को सिद्धान्त कुन सुन्दरतामा लागू हुन्छ?
अर्को: घर प्रयोग आईपल कपाल हटाउन के हो?